Cudurka stroke oo ku dhaca dhallinyaro fara badan. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cudurka stroke oo ku dhaca dhallinyaro fara badan.
La daabacay tisdag 23 juli 2013 kl 11.13
Waxaa yar dadka u dhinta cudurka stroke ama maskaxdhiiga waxaana la sheegayaa in tirada dadka u dhinta cudurkaasi in ay yihiin dadka da’da hase yeeshee cilmi baaris cusub oo laga soo saaray magaaladda Göteborg ayaa tilmaameysa in cudurkan uu imminka uu ku dhaco da’ aan horay looga baran.
Inta u dhaxeysay sanadihii 1987-2010 waxaa cilmi baaris lagu sammeeyay dad gaaraya afar boqol kun oo qof oo cudurkan uu ku dhacay waxaana cilmi baarista lagu ogaaday in da’da u dhaxeysa 18 ilaa 44 ee cudurka uu ku dhaco in ay kordheen 1,5 boqolkiiba sanadkii.
Sababta lama caddeyn balse isbedelada habka nolosha iyo tirada dadka cayilan ee dhallinyarada ah oo sii kordhay ayaa la rumeysan yahay in ay door ku leedahay koroka cudurkan ee dadka dhallinyarada ah, sida ay rumeysanyihiin cilmi baarayaasha.
Cudurkan ayaa inta badan curyaamiya qofka uu ku dhaco.
Farsamada tiknooliyada oo sii horumartay, sahleysana in xitaa la ogaado heerarka hoose ee cudurkan ayaa xitaa la sheegayaa in sabab u noqon karto sare kaca ka muuqda tirakoobkan hadda la soo saaray.